လူတစ္ေယာက္ အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး ဆုိတာ – GuGuGarGar
Shwe | July 21, 2020 | Knowledge | No Comments
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ နဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ စကား တစ္ခြန္းက ဒီလို ဆိုထားပါတယ္။ “သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားရင္ ေလွ်ာက္တဲ့လမ္း က ေျဖာင့္သြားတယ္”တဲ့။
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေ တြ အသစ္တိုးတာ မဂၤလာ တစ္ပါးပါ။ လူတိုင္း သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြနဲ႔ ခင္မင္ ရင္းႏွီးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ (American Sociological Review，ASR)က သူတို႔ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့တဲ့ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ အခုေခတ္ လူေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ နည္းသထက္ နည္းခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခံရသူ ၄ ပံု ၁ ပံုက သူတို႔မွာ သူငယ္ခ်င္းနည္းရတဲ့ အေၾကာင္းက ဘယ္သူ႔ကို မွ ယံုၾကည္လို႔မရေၾကာင္း ဆိုထားၾကတယ္။
လ်င္သူ စားစတမ္း၊ သာသူျမတ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ကာလေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းၾကား မွာ ဘယ္သူက အစစ္အမွန္၊ ဘယ္သူက အတုအေယာင္ ဆိုတာကို ခဲြျခားဖို႔ခက္ခဲသြားတယ္။ “သူငယ္ခ်င္း”ဆိုတဲ့ အေခၚကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိတ္လန္႔ လာခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္လို အရာမ်ဳိးကို သူငယ္ခ်င္း အစစ္အမွန္လို႔ ေခၚသလဲ? လူတစ္သက္မွာ အဲဒီလို သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိး ဘယ္ႏွေယာက္ လိုသလဲ? အေမရိကန္စာေရးဆရာ Todd Parr က “အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဆီကေန သင္လိုခ်င္တဲ့ အရာေတြ ရလိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔” လို႔ ဆိုထားတယ္။ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ Tom Rath က လူတစ္ေယာက္မွာ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး လိုအပ္တယ္ ဆိုၿပီး အခုလို႔ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔က သင့္ေကာင္းကြက္ေတြ သင္ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ဖို႔ သင့္ကိုအၿမဲ ကူညီအားေပးတယ္။ ဒီလို သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးကို ဆရာအမ်ဳိးအစား လို႔ေခၚတယ္။ သူတို႔က သင့္ရဲ႕ဆရာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ အျခားဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု၊ လူလူခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာ သူတို႔က သင့္ကို အႀကံဉာဏ္ေတြေပးႏိုင္တယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ဒီလို သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက သင့္စိတ္ကို ေထာက္ကူေပးတဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္အနားမွာ အၿမဲရွိေနၿပီး သင္အတုယူထိုက္သူလည္းျဖစ္တယ္။
သင့္ကို ဆံုးမလမ္းညႊန္ၿပီး လူေတြေရွ႕မွာ သင့္ကိုခ်ီးမြမ္းစကားေျပာတဲ့ သူငယ္ခ်င္း… ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက “နင့္ ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့္ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အခ်င္းခ်င္း ကူညီအားေပးတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဘဝရွင္သန္ႀကီးျပင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေဖးမကူညီမႈ၊ ခ်ီးက်ဴးမႈေတြက အဖိုးတန္လြန္းတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ သင္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက သင့္အခက္အခဲေတြကို ကူညီမွ်ေဝေျဖရွင္းေပးတယ္။ သင့္ရင္ထဲက ဖိအားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္မႈက သင့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္အားေဆးျဖစ္တယ္။
သင္နဲ႔ ဝါသနာတူသူက သင္နဲ႔ေပါင္းဖက္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးနဲ႔ အတူေနခ်ိန္ သင့္စိတ္က သူတို႔စိတ္နဲ႔ အာရံုခံစားမႈခ်င္းတူတယ္။ ဒါကို “နားလည္မႈ”လို႔ေခၚတယ္။ သင့္ေျပာတဲ့စကား၊ သင့္ေတြးတဲ့အေတြးေတြက သူတို႔အေတြးေတြနဲ႔ ထပ္တူနီးနီးက်တယ္။ စိတ္ခ်င္းကူညီအားေပးတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးကိုရတယ္။ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက သင့္ကိုယ္သင္ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ကူညီေပးသလို သင့္ဝါသနာ၊ သင့္ရည္မွန္းခ်က္၊ သင့္အႀကိဳက္ေတြကို သူတို႔နဲ႔အတူ မွ်ေဝခံစားႏိုင္တယ္။ ဒီလို မွ်ေဝခံစားမႈမ်ဳိးက သင့္စိတ္ကို လံုၿခံဳေစတယ္။ မိမိကိုယ့္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေစတယ္။ စိတ္ကူးကို အလြယ္တကူ အေကာင္အထည္ေပၚေစတယ္။ သင့္ဘဝကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းေစပါတယ္။
သင့္ကို ဆန္းသစ္တဲ့အျမင္၊ ဆန္းသစ္တဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ေတြ႔ျမင္ေစတဲ့သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးလည္း ဘဝမွာ မရွိလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕ “ကမာၻ႔စာၾကည့္တိုက္”ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုသူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးက သင့္အသိဉာဏ္၊ ဗဟုသုတ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို က်ယ္ျပန္႔ေစတယ္။ သင့္ကို မတူတဲ့စိတ္ခံစားမႈမ်ဳိးကို ခံစားေစတယ္။ သင့္ကို ျမင့္ျမင့္ရပ္၊ ေဝးေဝးလွမ္းၾကည့္တတ္ဖို႔ သင္ေပးသူေတြျဖစ္တယ္။
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အၿမဲမဆက္သြယ္တိုင္း၊ အၿမဲမေတြ႔ဆံုမိတိုင္း ေမ့သြားၿပီလို႔ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ေဟာင္းႏြမ္းသြားလို႔ရေပမယ့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈက ယုတ္ေလ်ာ့သြားလို႔ မရဘူး။ သင္႔ဘဝတစ္သက္မွာ စိတ္တူကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဘယ္ႏွေယာက္ရွိႏိုင္မလဲ? တကယ္လို႔ အထက္က သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိးနဲ႔ သင္ႀကံဳဆံုလာတဲ့အခါ သူတို႔ကို တန္ဖုိးထားျမတ္ႏိုးလိုက္ပါ။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ပတ်သက် တဲ့ စကား တစ်ခွန်းက ဒီလို ဆိုထားပါတယ်။ “သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများရင် လျှောက်တဲ့လမ်း က ဖြောင့်သွားတယ်”တဲ့။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေေ တွ အသစ်တိုးတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါ။ လူတိုင်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ (American Sociological Review，ASR)က သူတို့လေ့လာ ဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းစစ်ချက်အရ အခုခေတ် လူတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ နည်းသထက် နည်းခဲ့ကြတာကို တွေ့ရတယ်။ လေ့လာ ဆန်းစစ်ခံရသူ ၄ ပုံ ၁ ပုံက သူတို့မှာ သူငယ်ချင်းနည်းရတဲ့ အကြောင်းက ဘယ်သူ့ကို မှ ယုံကြည်လို့မရကြောင်း ဆိုထားကြတယ်။
လျင်သူ စားစတမ်း၊ သာသူမြတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကာလကြောင့် လူအချင်းချင်းကြား မှာ ဘယ်သူက အစစ်အမှန်၊ ဘယ်သူက အတုအယောင် ဆိုတာကို ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲသွားတယ်။ “သူငယ်ချင်း”ဆိုတဲ့ အခေါ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထိတ်လန့် လာခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လို အရာမျိုးကို သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန်လို့ ခေါ်သလဲ? လူတစ်သက်မှာ အဲဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုး ဘယ်နှယောက် လိုသလဲ? အမေရိကန်စာရေးဆရာ Todd Parr က “အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီကနေ သင်လိုချင်တဲ့ အရာတွေ ရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့” လို့ ဆိုထားတယ်။ အမေရိကန် စာရေးဆရာ Tom Rath က လူတစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၈)မျိုး လိုအပ်တယ် ဆိုပြီး အခုလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
(၁) ဆရာနဲ့တူတဲ့ သူငယ်ချင်း
သူတို့က သင့်ကောင်းကွက်တွေ သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်ဖို့ သင့်ကိုအမြဲ ကူညီအားပေးတယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးကို ဆရာအမျိုးအစား လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ဆရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ အခြားဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ လူလူချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ သူတို့က သင့်ကို အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်။ လူ့ဘဝမှာ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်စိတ်ကို ထောက်ကူပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ သင့်အနားမှာ အမြဲရှိနေပြီး သင်အတုယူထိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်။
သင့်ကို ဆုံးမလမ်းညွှန်ပြီး လူတွေရှေ့မှာ သင့်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့ သူငယ်ချင်း… ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက “နင့် ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့်ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အချင်းချင်း ကူညီအားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘဝရှင်သန်ကြီးပြင်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖေးမကူညီမှု၊ ချီးကျူးမှုတွေက အဖိုးတန်လွန်းတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ သင်ရင်ဆိုင်ရချိန် ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အခက်အခဲတွေကို ကူညီမျှဝေဖြေရှင်းပေးတယ်။ သင့်ရင်ထဲက ဖိအားကို လျော့ချပေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုက သင့်အတွက် စိတ်ဓာတ်အားဆေးဖြစ်တယ်။
(၃) စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း
သင်နဲ့ ဝါသနာတူသူက သင်နဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ အတူနေချိန် သင့်စိတ်က သူတို့စိတ်နဲ့ အာရုံခံစားမှုချင်းတူတယ်။ ဒါကို “နားလည်မှု”လို့ခေါ်တယ်။ သင့်ပြောတဲ့စကား၊ သင့်တွေးတဲ့အတွေးတွေက သူတို့အတွေးတွေနဲ့ ထပ်တူနီးနီးကျတယ်။ စိတ်ချင်းကူညီအားပေးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကိုရတယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်ကိုယ်သင် အသိအမှတ်ပြုလာအောင် ကူညီပေးသလို သင့်ဝါသနာ၊ သင့်ရည်မှန်းချက်၊ သင့်အကြိုက်တွေကို သူတို့နဲ့အတူ မျှဝေခံစားနိုင်တယ်။ ဒီလို မျှဝေခံစားမှုမျိုးက သင့်စိတ်ကို လုံခြုံစေတယ်။ မိမိကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။ စိတ်ကူးကို အလွယ်တကူ အကောင်အထည်ပေါ်စေတယ်။ သင့်ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းစေပါတယ်။
(၄) တံတားခင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း
ဒီလိုလူမျိုးက ကူညီတဲ့သူငယ်ချင်း အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ သင် အားရကျေနပ် ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အရိပ်တွေက သင့်အနားမှာရှိမနေဘူး။ သင့် စိတ်ညစ်အားငယ် ကြေကွဲချိန်ကျမှ သင့်ရှေ့မှောက် ရောက်လာတတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကူညီမှုမျိုးကို သူတို့ပေးတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးကို သင်ပြန်မြင်ရဖို့ သူတို့စွမ်းဆောင်ပေးတယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေ အရောင်တောက်အောင် သူတို့မပြတ်ကူညီပေးတတ်တယ်။
(၅) အားပေးဖော် သူငယ်ချင်း
ဒီလိုလူမျိုးက သင့်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ တချို့သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ကိုခင်မင်ရင်းနှီးပြီးတာနဲ့ သင့်ကို တခြားစိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သင့်စိတ်တွေ မွန်းကြပ်တဲ့အခါ၊ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ သူတို့က သင့်ရင်ဖွင့်သံကို ပထမဦးဆုံး နားထောင်ပေးသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနားထောင်သူဖြစ်တယ်။ သင့်စိတ်ကို ဖြေလျော့စေတယ်။ သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းရတာ သင့်ကို ဘာစိတ်ဖိအားမှ မရှိစေတဲ့အပြင် သင့်ရင်ထဲက မွန်းကြပ်နေတဲ့အရာတွေကို ထွက်ပေါက်ပေးစေတယ်။ သင့်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကို အသစ်တစ်ဖန် မွေးဖွားစေပါတယ်။
(၆) အသိအမြင်တိုးပွားစေတဲ့ သူငယ်ချင်း
သင့်ကို ဆန်းသစ်တဲ့အမြင်၊ ဆန်းသစ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို တွေ့မြင်စေတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးလည်း ဘဝမှာ မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့ “ကမ္ဘာ့စာကြည့်တိုက်”ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်အသိဉာဏ်၊ ဗဟုသုတ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ကျယ်ပြန့်စေတယ်။ သင့်ကို မတူတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားစေတယ်။ သင့်ကို မြင့်မြင့်ရပ်၊ ဝေးဝေးလှမ်းကြည့်တတ်ဖို့ သင်ပေးသူတွေဖြစ်တယ်။
(၇) လမ်းပြသူ သူငယ်ချင်း
သင့်စိတ်ကူးအတွေးတွေကို သန့်ရှင်းကူညီပေးသူ၊ လမ်းပြအကြံပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက လမ်းပြမီး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကူအညီဆိုတာ လိုအပ်တယ်။ တချို့အခက်အခဲတွေကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့မလွယ်ကူတဲ့အခါ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်ကို စိတ်ပါလက်ပါကူညီပြီး အသင့်တော်ဆုံး အကြံတွေကိုပေးတယ်။ သင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ၊ စိတ်ညစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို သင်ရင်ဖွင့်နိုင်တယ်။ သူတို့က ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ သင့်စိတ်ကို ကူညီသန့်ရှင်းပေးပြီး ကြည်လင်တဲ့ဖက်ကို လမ်းညွှန်ပေးတယ်။
(၈) သင့်ကိုအဖော်ပြုတဲ့ သူငယ်ချင်း
ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကိုအရင် သင်ပြောပြတယ်။ သူတို့ဟာ သင်နဲ့ အမြဲအတူရှိနေတယ်။ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက ပင်လယ်ထက်ကျယ်တဲ့ ရင်ခွင်ရှိတယ်။ တောင်တန်းတွေလို မြင့်မားတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိတယ်။ သူတို့ကို သင်ဘယ်အချိန်သွားရှာခဲ့ရှာခဲ့ သူတို့က သင့်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုတယ်။ သူတို့က သင့်အတွက် စိတ်ပြည့်ဝ၊ တည်ငြိမ်စေတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ပြောစရာ စကားများများစားစား မရှိချင်နေ သင့်အနားမှာ သူတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ သင့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲမဆက်သွယ်တိုင်း၊ အမြဲမတွေ့ဆုံမိတိုင်း မေ့သွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဟောင်းနွမ်းသွားလို့ရပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ယုတ်လျော့သွားလို့ မရဘူး။ သင့်ဘဝတစ်သက်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းကောင်း ဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်မလဲ? တကယ်လို့ အထက်က သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ သင်ကြုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလိုက်ပါ။
သြား ဘယ္္လိုေၾကာင့္ပဲ ကိုက္္ကိုက္္ (၅) မိနစ္္ အတြင္း ေပ်ာက္္ကင္းသြားေစမည့္္ ေဆးနည္္းတစ္္လက္္
WONDERFUL HERBAL KNOWLEDGE
ကိုဗစ္ ဒုတိ ယ လႈိင္း ကို ျဖတ္သန္းေန ရၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း
မိမိ မွာ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံ ရေနၿပီလား/ မခံ ရေသး ဘူ လား အလြယ္ တကူ လူ တိုင္း သိရွိႏိုင္ေသာ နည္း လမ္း